OpenSilver: yakavhurika sosi reimplementation yeSilverlight | Linux Vakapindwa muropa
OpenSilver: yakavhurika sosi reimplementation yeSilverlight
Iyo OpenSilver chirongwa chakapihwa, zvinova inoitirwa kugadzira yakavhurwa kuitiswa kweSilverlight chikuva, ane budiriro yakamiswa neMicrosoft muna 2011 uye kugadziriswa kunogara kusvika muna 2021.
Sirivheri iri tekinoroji inogonesa kukura kwehupfumi hwewebhu kunyorera (RIA) mune vector inopa injini isingachazotsigirwa kutanga gore rinouya. userware, software yekambani yakavambwa nenyanzvi mbiri dzeMicrosoft tekinoroji yakazivisa kuvhurwa kweOpenSilver, yakavhurika sosi reimplementation yeSilverlight inoshanda mune ese mabhurawuza kuburikidza neWebAssembly.
Sezvazviri neAdobe Flash, Silverlight kukura kwayo kuri kuderedzwa mukufarira kushandiswa kweyakajairika webhu-yakavakirwa matekinoroji. Pane imwe nguva, iko kuvhurwa kuitiswa kweSilverligh "Mwenje weMwedzi" yanga ichitogadzirwa pachishandiswa Mono, asi kukura kwayo kwakamiswa nekuda kwekushaikwa kwekuda kwetekinoroji nevashandisi.
Iyo OpenSilver chirongwa chakaita imwe kuyedza kumutsiridza Silverlight tekinoroji, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire inoenderana webhu kunyorera uchishandisa C #, XAML, uye .NET. Poshi Chimwe chezvinangwa zvikuru zveprojekti ndechekuwedzera hupenyu hunobatsira hweSilverlight application iripo mumamiriro ekuguma kwekutsigirwa kwepuratifomu uye kupera kwebrowser rutsigiro rwekuwedzera-ons.
Nekudaro, vanotsigira .NET uye C # tekinoroji vanogona zvakare kushandisa OpenSilver kugadzira zvirongwa zvitsva.
Mukuburitswa kwepepanhau kubva kuUdwareware, Giovanni Albani, CEO wekambani, akati:
"Nemabrowser mazhinji haasisiri kutsigira plug-ins seMicrosoft Silverlight, .NET vagadziri vakasara vasina nzira yekuvaka vapfumi macustomer-side application anomhanya mubrowser." "Asi nekuuya kweWebAssembly, chiyero chakavhurika icho chave kutsigirwa nevazhinji desktop uye mafoni mabhurawuza, izvi hazvichisiri izvo."
Iyo OpenSilver fomati yakavakirwa paMono yakavhurika mapurojekiti kodhi (mono-wasm) uye Microsoft Blazor (chikamu cheASP.NET Core) uye WebAssembly inoshandiswa kuitisa mubrowser kuvaka yezvishandiso mune yepakati kodhi.
Zvishandiso zveOverSilver zvinoenderana ne mabhurawuza ese anotsigira WebAssembly, iyo inosanganisira makuru mabhurawuza (Edge, Chrome, Firefox, Safari ...), pane ese makuru mapuratifomu (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ChromeOS ...), pasina vashandisi vanofanirwa kuisa plug-in, maererano neUswareware.
Kana zviri zvekushandisa zveSilverlight zviripo, zvinofanirwa kudzoreredzwa neOverSilver kuitira kuti vashande mumabhurawuza aya.
"Isu tiri vagadziri veNET vanotenda kuti Silverlight ndiyo yaive nzvimbo yepamusoro yekuvandudza mutsara webhizinesi (LOB). Tiri kusuwa kuona Silverlight ichinyangarika nekuda kwekushaikwa kwerutsigiro rwema plugin mumabhurawuza azvino.
Saka isu tinoda kuichengeta nekuimisikidza nayo neazvino, yakavhurika, zviyero-zvakavakirwa matekinoroji. Tinoda kuzviita zvakatonyanya kushamisa kupfuura pakutanga, kuitira kuti vagadziri vawane maturusi ekugadzira zvigadzirwa zvinoshamisa zvinogona kuchinja nyika ", ndicho chiratidzo chakaratidzwa nechikwata.
Mune fomu yazvino, rutsigiro rwunopihwa angangoita 60% yeSilverlight programming interfaces yakakurumbira
Gore rino, zvakarongwa kuwedzera rutsigiro rweiyo Open RIA uye Telerik UI masevhisi, pamwe nekuwiriranisa neiyo nyowani Blazor neMono projekiti base code yeWebAssembly, iyo inotarisirwa kutsigira proactive kuunganidzwa (Mberi-yenguva, AOT) ., iyo inobatsira kuvandudza mashandiro nekuyedza kusvika makumi matatu nguva.
Sekureva kwekuburitswa kwenhau, kufambiswa kweSilverlight kodhi kuenda kuOpenSilver kunopa akawanda mabhenefiti, kusanganisira kudzikisira mutengo Zvinoenderana neUserverware, zvinogona kuve zvakapetwa katatu kana mashanu kudhura kutamisa chishandiso cheSilverlight kuOpenSilver pane kuchinyorazve kubva pakutanga uchishandisa imwe tekinoroji.
Iyo projekiti kodhi inoparadzirwa pasi peMIT rezinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OpenSilver: yakavhurika sosi reimplementation yeSilverlight
Neofetch 7.0 yakatoburitswa uye inouya nerutsigiro rwemamwe masisitimu uye Wayland